Deegaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan Ayaa Lasheegayaa iney isaga Baxeen Dagaalyanadii Al-Shabaab ee ku Sugnaa Halkaas – STAR FM SOMALIA
Deegaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan Ayaa Lasheegayaa iney isaga Baxeen Dagaalyanadii Al-Shabaab ee ku Sugnaa Halkaas
Wararka ka imaanaya deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaalyanadii Al-Shabaab ee ku sugnaa halkaas isaga baxeen, markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku soo dhowaadeen.
Ciidamada huwanta ayaa qorsheynaya inay dib u qabsadeen deegaankan oo u dhaxeeya degmooyinka Beledweyn iyo Buulo Burde, kadib markii todobaadyo ka hor ay isaga baxeen.
Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda ee hogaaminaya howl galka oo lagu magacaabo Col. Nuur Maxamed ayaa sheegay in dagaalo ka dhacay inta u dhaxeysa Buulo Burde iyo Beledweyn ay ku dileen dagaalyahano ka badan 18, isla markaana ay haatan meelo badan ka carareen Al-Shabaab.
“Labadii maalmood ee u dambeeyay waxaa nimankii Al-Shabaab ahaa ka dilnay dagaalyahano badan, in ka badan 18 ayaa ka dilnay, meelo badan waa ka carareen, sida deegaanka Halgan oo kale, anaga meel aan sidaa uga fogeyn ayaa ku suganahay”ayuu yiri Col. Nuur Maxamed.
Waxaa uu sheegay in markii hore ay xeelad dagaal uga soo baxeen Halgan, hase ahaatee haatan ay doonayaan inay saldhig ka dhigtaan, maadaama deegaanka ku yaalo meel muhiim ah oo wadada isku xirta Beledweyn, Buulo Burde illaa Muqdisho.
Sidoo kale waxaa uu xusay in aysan mar dambe dhici doonin meel ay qabtaan inay hadana ka soo baxaan, waxaana uu ugu baaqay shacabka deegaanka inay ciidamada la shaqeeyaan.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa horaantii bishan la wareegay deegaano badan oo ka tirsan Gobolka Hiiraan, inkastoo meelaha qaar isaga soo baxeen, waxaana taas ay keentay in odayaasha deegaanka walaac ka muujiyaan.
Madaxweynaha Somaaliya iyo Dhaxal sugaha dowladda Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed Bin Zayid Al Nahyan Ayaa Kulan Kuwada Qaateen Magaalada Abu Dhabi